Diraamaa Gabaabaa – Abbaa Shubbee (FT) - Ayyaantuu News
Diraamaa Gabaabaa – Abbaa Shubbee (FT) 4 comments - What do you think? Posted by Falmataa - 28/04/2013 at 9:57 am Categories:
4 Responses to “Diraamaa Gabaabaa – Abbaa Shubbee (FT)”
bilisumma hawwe says:	28/04/2013 at 1:56 pm	Jireenya ilmaan oromoo isa dhugaa kan amma ta’uutti jiru.Barri ni darba,murni xiqqoo tana dhiisii moototni gurguddaan kan meeshaa waraana gurguddaa qabanuu kufanii daaraa ta’anii arginee jirra.Barri kunis darbee guyyaa dhalli oromoo manni hidhan,baqachuu,ajeefamuun,fi kkf irra dhaabatu ni dhufa.
Karaa dand’ameen,qaawwaa argatan hundatti fayyadamanii gartuu tana barbaddessu qabna.
Abdi says:	28/04/2013 at 2:46 pm	hedduu bareedaadhaa kan jireenya ummata kheenyaa argisiisuu ammallee itti jabaadhuun siin ja’a hojjataa diraamaa kanaa.
Aannoo says:	28/04/2013 at 9:09 pm	AMANTAA!!!!!
Hallayyaa bililee waatu keessa goohaa
Mootummaan wayyaanee irraa kaasee dhukkee
proudOromian says:	01/05/2013 at 6:59 pm	WOW! Achumaa fuunyaan diina jalla teessanii kana hojjechuun keessanii haali hummanii keenya jala jiruu jibisiisaafi adhawaa taanaan issiinis garakuttanoodhaani eergaa gudaa kana maxxanootaafi wara abbagaraa akkekaachiisuufi sochottanii Jabbadhaa!
Waqqayoo warratii xirooftuu sana issinaabaraaru!
Bilisumaa hammasi Bilisumaa!